तरकारीखेतीबाट छोराछोरीको पढाइ, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
तरकारीखेतीबाट छोराछोरीको पढाइ
कञ्चनपुर (रासस) । कृष्णपुर नगरपालिका–६ बालुवाफाँटाकी फूलमति चौधरीले व्यावसायिकरुपमा तरकारीखेती गर्न थालेको १२ वर्ष भयो । चौधरी थारुको बाहुल्यता रहेको बालुवाफाँटामा फूलमति जस्तै करीब दुई सय महिलाले व्यावसायिक तरकारीखेती गरेर गाउँनै हराभरा बनाएका छन् ।
“यहाँ रहेका घरमा पाँच कठ्ठादेखि एक बिघासम्म तरकारीखेती गरिएको छ”, तरकारी बारीमै भेटिएकी चौधरीले भनिन्, “मेहनत गरे अनुसारको फल मिलकै छ ।”
उनले पछिल्लो समय तरकारी खेतीमा पूरै गाउँको आकर्षण बढेको जानकारी दिइन् । “दैनिक दुई घण्टाको यात्रा गरेर तरकारी कैलालीको अत्तरीयास्थित सब्जीमण्डी पु¥याएकै छौं”, चौधरीले भनिन्, “बालुवाफाँटावासीको आयस्रोतको प्रमुख माध्यमनै तरकारीखेती हो ।” उनले वार्षिक रु एक लाख ५० हजारसम्मको तरकारी बिक्री गरिरहेको बताइन् ।
“यहाँ पहिले चौधरी थारु समुदायका विद्यार्थी सबै सरकारी विद्यालयमा जान्थे”, उनले भनिन्, “तरकारीबाट मनग्य आम्दानी हुन थालेपछि अहिले सबै छोराछोरी निजी विद्यालय पढाउन थालेका छन् ।”
चौधरीले गाउँमा छोराछोरीलाई निजी विद्यालय पढाउने लहर नै चलेको बताइन् । “आम्दानीअनुसार मैले पनि अहिले कान्छो छोरालाई बोर्डिङमा भर्ना गरेको छु”, उनले भनिन्, “वार्षिक रु १५ हजार भए छोराको पढाइखर्च चल्छ ।”
विसं २०५२ देखि तरकारी फलाउँदै आएका लालबहादुर चौधरीले भने, “हाम्रो कृषि सहकारीमा पनि अहिले ५० जना तरकारीखेती गर्ने किसान आवद्ध छन् ।” गाउँमा इन्द्रेणी कृषि सहकारी समेत सञ्चालनमा ल्याएका तरकारीखेती गर्दै आएका किसान मासिक रुपमा बचत गरेका छन् भने व्यवसाय बढाउन र सहज बनाउन सहकारीबाट ऋण समेत लिने गरेका छन् ।
“मैले पनि तरकारीखेती गर्न रु ४१ हजार ऋण लिएको थिए”, लालबहादुरले भने, “सबै ऋण तिरेर दुईवटा नातीलाई बोर्डिङ पढाइरहेको छु ।” गाउँमा तरकारी उत्पादन व्यापक भए पनि खपतका लागि भने बजारको समस्या रहेको किसानको भनाइ छ ।
“बैलगाडा, मोटरसाइकल र टाउँकामा बोकेरसमेत तरकारी बेच्न अत्तरिया जानुपर्ने बाध्यता छ”, उनले भने, “नजिकै कुनै बजार नहुँदा समस्या भयो ।” गाउँमा पुरुष भन्दा बढी महिला तरकारीखेतीमा सक्रिय रहेको लालबहादुरको भनाइ थियो ।
“मेहनत गरेर तरकारीखेती गरिरहेकालाई प्याकेजमा अनुदान दिनुपर्ने वातावरण हुनुप¥यो”, उनले भनिन्, “उत्पादन भएर मात्रै भएन बजारको उचित प्रबन्धका लागि पनि स्थानीय तहको ध्यान समयमै जानु जरुरी छ ।”
कृष्णपुर नगरपालिका–६ बालुफाँटाका वडाध्यक्ष नत्थुराम चौधरीले बालुवलाफाँटा तरकारीमय भएको बताए । “यहाँ हरेक घरमा तरकारी किसान निकै खटिएर उत्पादनमा लागेका छन्”, वडाध्यक्ष चौधरीले भने, “बिक्रीको समस्या हुन नदिन वडाले गाउँमै तरकारी सङ्कलन केन्द्र निर्माण गर्दैछ ।” वडा कार्यालयले तरकारी सङ्कलन केन्द्र निर्माण गर्न रु द्ुई लाख रकम समेत विनियोजन गरेको छ ।
त्यसका साथै कृष्णपुर नगरपालिकाले समेत बालुवाफाँटामा तरकारी पकेटक्षेत्र बनाएर किसानलाई विभिन्न सहुलियत तथा अनुदान दिइरहेको वडाध्यक्ष चौधरीको भनाइ थियो । “कृषि समूहमार्फत पकेट क्षेत्रका किसानलाई अनुदान तथा सहुलियत दिएका छौं”, उनले भने, “किसानको प्रोत्साहनका लागि वडा कार्यालयले थप कार्यक्रम ल्याउनेछ ।”